XOG CUSUB: Xubno ka tirsan Daacish oo maxkamadda ka soo muuqday +(Magacyadooda) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Xubno ka tirsan Daacish oo maxkamadda ka soo muuqday +(Magacyadooda)
XOG CUSUB: Xubno ka tirsan Daacish oo maxkamadda ka soo muuqday +(Magacyadooda)
Muqdisho (Halqaran.com) – Aadan Maxamed Cali iyo Cabdishakuur Xaaji Barsanji ayaa markii labaad ka soo muuqday Maxkamada Ciidamada Qalabka sida, Maxkamada ayaa balamisay fadhigii kan ka horeeyay in xafiiska Xeer ilaalinta la yimaadaan marqaatiyaasha iyo cadeymaha Kiiskan ku xusan.
Hay’adda dambi baarista Booliska CID-da ayaa fursad loo siiyay iney sharaxaan Kiisas shan ah oo ku xusan gal dacwadeedka eedeysanaha koowaad iyo kaalinta eedeysanaha labaad.
Labadan eedeysane ayaa si wada jir waxaa loogu eedeynayaa iney ka wada tirsan yihiin Ururo Hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka , gaar ahaan kooxda Daacish.
Eedeysane Aadan Max’ed Cali ayaa waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay Kooxda Daacish una qaabilsanaa Qeybta fulisa dilalka qorshaysan, wuxuuna ka soo howlgalay Gobolada Banaadir Iyo Bari, qaybna ka ahaa fulinta dilalka soo socd:-
Taariikhdu markay ahayd 24/09/2018 , waxaa Boosaaso ku dishay Ex-Marxuum L/x/le Axmed Hurfe Jaamac Barre oo ahaa Taliyahii Gaadiidka Madaxtooyada Puntland.
2.Taariikhdu markay ahayd 25/10/2018 , waxaa sidoo kale Magaalada boosaaso ku dishay Marxuum C/raxmaan Aadan Cali oo ahaa ganacsade sharaab ku iibin jiray Magaalada.
3.Taariikhdu markay ahayd 19/01/2019 waxaad degmada H/wadaag ku dishay labo marxuum oo lagu kala magacaabi jiray Marxuum Axmed Max’ed Nuur (Axmed Shiikhaal) oo ahaa Guddoomiye Laameed iyo Marxuum C/laahi Muxumed Cali (C/laahi dheere).
4.Taariikhdu markay ahayd 27/01/2019 waxaad Degmada Yaaqshiid ku dishay Ex-Marxuum D/le X. Axmed Cabdi Xuseen, iyadoo Ciidamada amnigu ay kusoo qabteen kadib markii uu dhaawac kaa soo gaaray fulinta dilka marxuumka.
Sidoo kale, eedeysane C/shakuur Xaaji Barsanji ayaa waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish, isagoona eedeysanaha koowaad gacan ka siiyay inuu ka baxsado gacanta ciidamada amniga,islamarkaana uu Cisbitaal geeyay dhaawiciisa.
Guddoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo soo xiray fadhiga Maxkamada ayaa sheegay in dhageysiga gar-maqalka labadan eedeysane intaa uu ku dhammeystiran yahay,islamarkaana ay Maxkamada go’aan ka soo saari doonto.
ka soo muuqday
Xubno ka tirsan Daacish